Mbola Manivàna Ny Tranonkalan’ny Mpifanandrina sy Mpitsikera Indray Ny Manampahefana Palestiniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2017 5:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Español, Français, Ελληνικά, English
Filohan'ny Fahefana Palestiniana, Mahmoud Abbas, tany amin'ny Vovonamben'ny Toekarena Erantany tamin'ny 2007. Mpitsikera ny fitondrany ireo tranonkala voasakana. Sary avy amin'ny Vovonamben'ny Toekarena Erantany (CC BY-SA 2.0)
Nandefa torolalana ny Lehiben'ny Fampanoavana ao amin'ny Manampahefana Palestiniana (PA) ho an'ireo mpanome tolotra aterineto (ISP) Palestiniana roambinifolo izay miasa any amin'ny Amoron'i Jordana mba hanakana tranonkala 11 mifandray amin'ireo mpifanandrina ara-politika sy mpitsikera ny Filoha Mahmoud Abbas.
Ny ankamaroan'ireo tranonkala ireo dia mifandray amin'ny antoko Islamista mpanohitra sy vondrona mpikatroka Hamas, izay mifehy ny faritr'i Gaza. Nt tranonkala iray dia mifandray amin'ny Abbas mpifanandrina sy ilay mpikambana fahiny tao amin'ny Fatah, Mohammad Al-Dahlan, izay noroahana tao Fatah tamin'ny 2011.
Araka ny tatitra dia ao amin'ny Amoron'i Jordàna ihany no voasakana ireo tranonkala ireo, noho ny ”lalànan'ny famoahana”, izay manakana ny famoahana vaovao tsy marina sy/na fanalàna baraka. Mbola tsy mazava tsara izany, hoe ”lalàna” inona no nampiasain'ny PA mba hanakanana ireo tranonkala ireo, fa ny Lalàna Fanaovana Gazety sy Famoahana tamin'ny 1995 dia ahitàna fepetra tsy mazava sady midadasika mikasika ny fahalalahàna maneho hevitra. Ohatra, ireo famoahana dia tsy mahazo ”manohitra ny fitsipiky ny …andraikitra nasionaly” na mizara zavatra izay ”tsy manaraka ny lojikan'ny toe-tsaina amam-panahy” na izay mety ”hanozongozona ny fahatokisana ny volan'ny firenena.”
Ny 12 Jona no navoaka ilay baiko. Milaza ireo palestiniana monina ao Amoron'i Jordàna fa efa tsy afaka niditra tamin'ireo tranonkala ry zareo nanomboka tamin'izay andro izay.
Anisan'ireo tranonkala ireo ny Amad.ps, Masoivohom-baovao Shehab mifandray amin'ny Hamas, sy ”Feon'i Fatah” fantatra toy ny akaiky an'i Al-Dahlan. Naneho ny fanoherany ny fanivànana i Hassan Asfour, talen'ny fanoratana ao amin'ny Amad, tao anatinà lahatsoratra fanehoankevitra mitondra ny lohateny ”Avy amin'ny Amad News ho an'ny Lehiben'ny Mpampanoa Lalàna ao amin'ny PA any Ramallah… Tsy hanafina ireo tantara ratsinao ny fanivànana”:
Manana ny heviny momba ny fahalalahàna, demokrasia sy ny fampiharana ny zo rehetra eo amin'ny sehatry ny fiainana sy ny zavatra takian'izany i Abbas, izay naverimberiny im-betsaka tamin'ny media sy ireo delegasiona, mandra-pinoan'ny mpihaino fa izy dia mpiambina ny fahalalahàna sy ny fampiharana azy lavitry ny loza. Fa noho ilay fanakànana ny Amad amin'ny Media, dia nidaboka ireo fanambaràna ary niteny ny zava-misy marina.
Fikambanana maro no efa nitati-bolana momba ilay torolalana. Ny Foibe Palestiniana Ho an'ny Fampandrosoana sy ny Fahalalahàn'ny Media (MADA) dia nizara filazàna iray miantso ny PA mba hanàla ilay baiko, amin'ny fiantsoana izany ho fandikàna ny fahalalahàna maneho hevitra sy ny Lalàna Fototra Palestiniana. Efa niampanga ilay baiko fanakànana ihany koa ny Foibe Arabo Ho an'ny Fampandrosoana ny Media Sosialy (7amleh) tao anatina filazàna nozaraina tamin'ny 16 Jona:
[Izahay] mahita fa ity hetsika ity dia tena mandika tanteraka ireo fifanekena rehetra sy ireo fifanarahana iraisam-pirenena, ary manamarika fandikàna manan-danja ny zo niomerikan'ny ampahan'ny fiarahamonina Palestiniana. Ireo Palestiniana dia manana zo haneho ny heviny ao amin'ny tontolo niomerika, ary hiditra amina tranonkala elektronika rehetra sy loharanom-pahalalana izay mahaliana azy ary miantoka ny zon'izy ireo haneho ny heviny sy ny faniriany.
Tsy vao voalohany hanivànan'ny PA tranonkala izao. Tamin'ny 2008, efa nisy tatitra fa nosivanin'ny ny PA ny tranonkala iray antsoina hoe Dounia Al Watan tao Amoron'i Jordàna, tranonkala miorina ao Gaza izay mitatitra ny kolikoly ataon'ny PA, raha toa ka tamin'ny 2012 dia nangatahany ireo ISP mba hanakana tranonkala valo izay tao anatin'izany ny Amad.ps, anisan'ireo tranonkala nosakanana ihany koa tamin'iny herinandro lasa iny.